Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Kalmar län / Mörbylånga
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 25 5 2020
3,038 kiilomitir oo laba jibaaran
Kalmar 30 kiilomitir
Karlskrona 116 kiilomitir
Växjö 136 kiilomitir
Masawirqaade: Per Påhlsson
Degmada Mörbylånga waxeey qani ku tahay jaaliyadaha waxeeyna kala yihiin kuwa isboortiska iyo kuwa hiddaha iyo dhaqanka.
Daryeelka caafimaadka, daryeelka caafimaadka iyo daryeelka bukaanka ee degmada.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha.
Masawirqaade: Britt Johansson
Shaqooyinka ka banaan gudaha Mörbylånga